ဤတွင် HOME ALONE မှ MCCALLISTER ကလေးများယခုထိရှိနေသည် - သတင်း
ဤတွင် Home Alone မှ McCallister ကလေးများသည်ယခုအထိဖြစ်သည်
Netflix သည်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်များကိုပွဲလမ်းသဘင်သို့အလျင်အမြန်ပို့ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်၍ နိုဝင်ဘာလဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သိသည်။ အားလုံး၏အထင်ရှားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးကိုသိရှိရန်မှာ Home Alone ဖြစ်ပြီးယခုသူတို့သည်နှစ် ၃၀ ပြည့်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပပြီးသည့်အခါကလေးသူငယ်အပေါ်ထားရှိသည့်အရာများကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ရှုရန်အချိန်ရောက်ပြီ။
ကြီးကျယ်သောကမ္ဘာကြီးသို့ထွက်သွားကြသည့်ကလေးသရုပ်ဆောင်အဖွဲ့များကဲ့သို့ပင်မကြာခဏသူတို့သည်ကျယ်ပြန့်သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့သည်အောင်မြင်သောသရုပ်ဆောင်နှင့်သရုပ်ဆောင်မဖြစ်နိူင်ပါ။ အက်ကွဲ။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအိုလံပစ်ကနေလျှပ်စစ်, ဒီမှာ Home Alone ၏ကလေး၏သွန်းလက်ရှိသူတို့ဘဝနှင့်အတူလုပ်နေတာဘာပါပဲ။
Macaulay Culkin - ကီဗင်
သင်သေချာသိသည်နှင့်အမျှ Macaulay သည် Kevin McCallister အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးကတည်းကလူသိရှင်ကြားလူသိများသောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းမှသည်မူးယစ်ဆေးဝါးပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်စွဲချက်တင်ခံရခြင်းမှသည်သူ၏ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်မီဒီယာတွင်စစ်ဆေးမှုများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်းမှသည် Culkin သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူတစ် ဦး ထွက်ပေါ်လာပုံရသည်။
Brenda သီချင်း (@brendasong) မှမျှဝေသောပို့စ်။
Mila Kunis နှင့်နှစ်အတော်ကြာတွေ့ဆုံပြီးနောက်သူသည်ယခုအခါမင်းသမီး Brenda Song နှင့်ရင်းနှီးနေပြီဖြစ်သည်။ သူသည် Bire Ears ဟုခေါ်သောသရော်စာဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Podcast တခုကိုဖွင့်ပြီးသူသည်နောက်ဆုံးပေါ် American Horror Story တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်အသက် ၄၀ ရှိပါပြီ
- မက်aulay Culkin (@IncredibleCulk) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၆ ရက်
အသက် ၄၀ ရောက်သောအခါသူဤသို့ရေးခဲ့သည် - ဟေ့ယောက်ျားတွေ၊ သင့်ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ tweet သည် app တွင်အကြိုက်ဆုံးသောပဉ္စမမြောက်ဖြစ်လာသည်။
Buzz ဒုက္ခသည်၌သူ၏အစ်ကိုရဖို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘာမျှမကြိုက်တယ်သူကို Buzz (သူ့မိသားစုထဲကအရာထဲကနေမဟုတ်ခဲ့ကြပေမယ့်?) ၏ကီဗင်၏လည်ချောင်းနာအစ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
Devin Ratray သည် Hawaii Five-O နှင့် The Good Wife တို့တွင် Home Alone မှစ၍ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေပြီး Red Dead Redemption Two ရှိဇာတ်ကောင်အားသူ၏အသံကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
Devin Ratray (devinratray) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
သူလည်း Amazon ရဲ့ The Tick အတွက်ထပ်တလဲလဲအခန်းကဏ္ had ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါဖြစ်ကောင်းဤအထွက်ရှာတွေ့မှနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး, အထူးသဖြင့်သူတို့ကသူတို့ကအလားတူကြည့်ရှုစဉ်းစားပေမယ့် Kieran CULKIN ကသူ့အစ်ကို Macauley CULKIN သည်သူ၏အငယ်ဆုံးဝမ်းကွဲအဖြစ်အတူနေအိမ် Alone အတွက်ထင်ရှား။ ,
Culkin သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွင်အလွန်အောင်မြင်သောသရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Scott Pilgrim v The World တွင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး HBO စီးရီးဆက်ခံခြင်းတွင်သူ၏အခန်းကဏ္ for အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ရွှေလက်အိတ်အဖြစ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသည်။
ဟီလာရီဝံပုလွေ - Megan
Megan ကီဗင်ရဲ့အစ်မကြီးနှင့်ဟီလာရီ Wolf ကကစားခဲ့သည်။ အားလုံးအချိန်အကျော်ကြားဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုမှာဖြစ်ခြင်းတစ်ခုအောင်မြင်မှုအလုံအလောက်မဟုတ်ခဲ့လျှင်သကဲ့သို့, ဟီလာရီအောင်မြင်သောအားကစားသမားဖြစ်လာမှသွားလေ၏။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်များအတွက်အိုလံပစ်တွင်အမေရိကန်ကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမပြုမီ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်လူငယ်များအတွက်ကမ္ဘာ့ဂျူဒိုချန်ပီယံဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
မိုက်ကယ်စီ Maronna - ဂျက်ဖ်
မိုက်ကယ်မာရိုနာသည်ဂျက်ဖ်အားကစားခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်အနည်းဆုံးသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး အနေနှင့်၎င်းအခန်းကဏ္ career သည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်များစွာမလုပ်ဆောင်ခဲ့ဟုပြောခြင်းသည်မျှတပါသည်။ သူ၏နောက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်ခရက်ဒစ်သည် ၂၀၀၄ တွင်ဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော်သူသည်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်များတွင်လျှပ်စစ်အဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သောကြောင့်မီးများနှင့်ကင်မရာများနှင့်ပေါင်းသင်းခဲ့သည်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိ၏။
Danny & Mike ၏စွန့်စားမှုများ (@dannyandmikepodcast) မှမျှဝေထားသော post တစ်ခု။
သူသည်လက်ရှိတွင်သူ၏အိမ်ထောင်ဖက် Danny နှင့် Adventures of the Danny နှင့် Mike နှင့် Podcast တခုကိုလက်ခံထားသည်
Angela Goethals - လင်းနီ
Linnie သည်ကီဗင်၏မွေးချင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး Angela Goethals ကစားသည်။ သူမသည်သာရံဖန်ရံခါရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၌ထငျရှားရှိခြင်း, ကတည်းကအများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာမထားပါဘူး။ ဤတွင်သူမကယခုပုံစံကို:
Angela Goethals-soder (@angbeegee) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ဒိုင်ယာနာရိန်း - Sondra
ဒီအလွန်ဖန်စီပန်းအစိမ်းရောင်အင်္ကျီတွင်ဤနေရာတွင်တွေ့မြင်ကီဗင်ရဲ့အဟောင်းဝမ်းကွဲ Sondra, အစားဂီတပညာရှင်အဖြစ်အသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသို့ပြောင်းရွှေ့, ကတည်းကအများကြီးသရုပ်ဆောင်ပြုတော်မမူကြောင်းကိုအခြားကလေးသူငယ်မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမိန်းမသည်မှာအားလုံးမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး!
Diana Rein (@dianarein) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
Senta မောရှေသည် - Tracy
Senta မောရှေသည် Tracy ကိုတီးခတ်ခဲ့သည် (ဤအချက်အားဖြင့်၎င်းသည်မည်သည့်အမည်မျှမဖြစ်၊ ငါသဲလွန်စမရနိုင်ပါ) သူမသရုပ်ဆောင်ခြင်းတွင်ဗြိတိန်ပရိသတ်များအတွက်မှတ်မိလောက်အောင်သော်လည်းသရုပ်ဆောင်ခြင်းတွင်အစိုင်အခဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ Emmys အတွက်ယနေ့ညဖန်စီတယ်။ ဒီလူကိုငါအရမ်းဂုဏ်ယူတယ် #DeadliestCatch
အခြားသတင်းများမှာ mascara ကိုဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်ခါထိုးလိုက်တယ်။ pic.twitter.com/FwvE785hvE
- Senta မောရှေ Mikan (@SentaMosesMikan) စက်တင်ဘာလ 15, 2020
သူမသည်ရုပ်ရှင်အယ်ဒီတာဂျိုးဇက် Mikan နှင့်လက်ထပ်သည်။
အန်နာ Slotky - Brooke
ကီဗင်ရဲ့အငယ်ဝမ်းကွဲ Brooke Anna Slotky နေဖြင့်ကစားခဲ့သည်။ သူမသည်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌ရှေ့နေဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 2000 ကတည်းကသရုပ်ဆောင်ခရက်ဒစ်တယ်မရှိသေးပေ။ အခုအသက် ၃၉ နှစ်ရှိပြီ၊ သူမအိမ်ထောင်ကျပြီးရှစ်နှစ်အရွယ်သားတစ်ယောက်ရှိတယ်။
ဒါကအန်တီ ၀ ီဝီဂန်ဒန်ကဲ့သို့အန်နာဆလိုကီဖြစ်သည်။ : ၃ pic.twitter.com/MDERR5gfWT
- Ndhas (@ahmdirfna) ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃
သငျသညျကြည့်ရှုရန်ဆန္ဒရှိလျှင်ဤတွင်သူမ၏တစ် ဦး ဆိုးရွားစွာမှုန်ဝါးဓာတ်ပုံကိုပါပဲ။
Kristin Minter - ဟဲလ်
ကီဗင်ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးဝမ်းကွဲဟဲလ်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်, မင်းသမီး Kristin Minter ကတည်းကအလုပ်၏အလွန်တသမတ်တည်းစီးရှိခဲ့ပါတယ် - နောက်တဖန် Non- အမေရိကန်ပရိသတ်တွေအဘို့အများကြီးမဟုတ်ပေမယ့်အထင်ကြီး။
Kristin (@kristin_minter) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
•ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်သင်တို့ကိုမှတ်မိသလား။ ဤတွင် 12 Baker ကလေးတွေယခုမှတက်ဘာတွေလုပ်နေလဲ
•ကျွန်ုပ်တို့သည် Netflix တွင်အဆိုးရွားဆုံးသောခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်ကားများကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဒီမှာကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်